Sports News – Page 82 – FBV SPORT NEWS
ဆန်ချိုအစား ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးရှင်ဟောင်းကို ယူနိုက်တက်စိတ်ဝင်စားလာ
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ အပြောင်းအရွှေ့စျေးကွက်အတွင်းမှာ အနည်းဆုံးကစားသမား ၃ဦးအထိ ထပ်မံခေါ်ယူချင်နေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ နံပါတစ်ပစ်မှတ်အဖြစ် ဂျေဒန်ဆန်ချိုကို သတ်မှတ်ထားပြီး နောက်ခံလူတစ်ဦး၊ တိုက်စစ်ကစားသမားတစ်ဦးကို ဆိုးလ်ရှားက ထပ်မံအလိုရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ ဆန်ချိုကိုခေါ်ယူဖို့ အခက်အခဲတွေရှိနေပြီး …
မန်ယူမှာ သွင်းဂိုးတွေ နဲ့ ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှူးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဝိန်းရွန်းနီဟာ လက်ရှိမှာ အသက်ရွယ်လည်းရနေပါပြီ…လက်ရှိတော့ ဒါဘီကောင်တီအသင်းမှာ ကစားလျက်ရှိပါတယ်…မန်ယူမှာ နောက်ဆုံးကစားစဉ် ပွဲထွက်ကစားခွင့် မရေမရာဖြစ်ရာမှာ အသင်းပြောင်းရွေ့ကစားနေရသော ကျနော် တို့မန်ယူဖန်တွေရဲ့ Hero ကြီးပါ….. Soccer …
မန်ယူအသင်းဟာ အပြောင်းအရွေ့မှာ ဗန်ဒါဘတ်ကိုခေါ်ယူပြီး နောက်ထပ် ကစားသမားထပ်ဖြည့်ဖို့လုပ်ဆောင်နေပါတယ်…. Werner ဒီနေ့မနက်ပိုင်း မန်ချက်စတာ မနက်ပိုင်း 9:00 AM မှာ အပြောင်းအရွေ့အတွက် ဆွေးနွေးမှုများပြလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်…..Havertz အတွက်ကိုတော့ တောင်းဆိုတဲ့ ပြောင်းရွေ့ကြေးကိုမပေးနိုင်တဲ့အတွက် ဆွေးနွေးမှု မပြုလုပ်ဘူးလို့သိရပါတယ်…. မန်ယူအသင်း …
အသက် ၃၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မက်ဆီဟာ လက်ရှိ ဘာစီလိုနာ အသင်းမှထွက်ခွာမယ်လို့သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့တာသိပြီးကြမှာပါ…တကယ်လည်း မက်ဆီဟာ ဘာစီလိုနာမှာ ကစားရတာမပျော်ဘူးလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်….လက်ရှိ ပရီးမီးယားလိဂ် ထိပ်သီးအသင်း ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ချဲဆီးလ် မန်ယူ မန်စီးတီး အသင်းတို့ဟာ မက်ဆီကို …
မန်ယူကွင်းလယ်ကစားသမား ဖရက်ကို တူရကီထိပ်သီးအသင်းတခုဖြစ်တဲ့ ဂါလာတာဆာရေးအသင်းကတနှစ်အငှဦးစာချုပ်ဖြင့်ခေါ်ယူရန်ညှိနှိုင်းနေတယ်လိုတူရကီသတင်းFotomacမှာထုတ်လွှင့်သွားပါတယ်။ ဖရက် ကိုအပြီးသတ်ဝယ်ယူခွင့်ပါရှိတဲ့အငှားစာချုပ်မျိုးနဲ့ကမ်းလှမ်းဖွယ်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်း တူရကီ အသင်းရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို စိတ်ဝင်စားကြောင်း အဆိုပါသတင်းတွေကိုLikeလုပ် ခြင်းဖြင့် အသိပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဖရကဟွာ ၂၀၁၈ဘောလုံးရာသီမှာနညွးပှဟောငွးမောရွငဟွိုနောကဆွုံးဝယယွူခဲ့တဲ့ကစားသမားတဈဦးဖှဈပှီးရှကတွာဒိုးနကအွသငွးစီကနေ ပေါငွ၅၂သနွးနဲ့ဝယယွူခဲ့တာပါ။မနယွူကိုရောကရွှိလာခှိနမွှာခှစှမွေးပှသနိုငခွှငွးမရှိဘဲ အသငွးကနထှကခွှောတော့မယလွို့ မကှာခဏ သတငွးတှထှကပွေေါခွဲ့ပမယေ့နွညွးပှဆိုးရှားရောကရွှိလာပှီးနောကပွိုငွးမှာ ပုံမှနခွှစှမွေး …
September 24, 2020 By admin International News, News, Sports News
မန်ယူအသင်းက မိုနာကိုအသင်းမှ လူငယ်ဗဟိုနောက်ခံကစားသမား ဘိုရှီရယ်ကို ပထမအကြိမ်ကမ်းလှမ်းစဉ်က ပယ်ချခံရပေမယ့် ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကအသင်းကထွက်ခွာချင်တဲ့ပုံစံတွေကိုပြသလာတာကြောင့် ဒုတိယအကြိမ်ကမ်းလှမ်းမှုမှာ အဆင်ပြေဖို့များနေပါပြီ။ယူနိုက်တတ်အသင်းဟာ ဘိုရှိရယ်အတွက် ဂျာမန်ကလပ်လေပါကူဆင်အသင်းနဲ့ယှဉ်ပြိုင်နေရပြီးယူနိုက်တတ်အသင်းပထမအကြိမ်ကမ်းလှမ်းတဲ့ပြောင်းရွေ့ကြေးယူ၇◌ို၂၅သန်းကို မိုနာကိုအသင်းက ပါယ်ချပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လေပါကူဆင်အသင်းက ကမ်းလှမ်းမှုမရှိသေးပါဘူး။ အပြောင်းအရွေ့ရာသီစတဲ့က ဆန်ချိုတစ်ဦးထဲနောက်ကိုသာ သည်းသည်းမဲမဲလိုက်နေတဲ့ ယူနိုက်တတ်အသင်းဟာ လာမယ့်ဘောလုံးရာသီ မှာလေပါပူလ်းအသင်းနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းတို့ကိုအမှီလိုက်ဖို့ …
ရိုနယ်ဒီု ဟာ ဂျူဗင်တပ်မှာလည်း အောင်မြင်မှုတွေကို ဆက်လက်ထိမ်းသိမ်းနေဆဲသူပါ…..အင်တာဗျူးတခုမှာ ဖြေကြားတာကတော့ စိရိုနယ်ဒိုက ကျနော်က စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေ ကို အမြဲလိုချင်နေသူပါပြီးတော့ များမကြာမီမှာ ပြင်သစ်မှာလည်း ကစားချင်ကြောင်း …ပြင်သစ်မြေက စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကိုလည်း တွေ့ချင်ကြောင်း …အဲ့ဒီနေရာမှာ အောင်မြင်တွေလိုချင်ကြောင်းကိုလည်း ဖြေကြားထားပါတယ်…ပြင်သစ် …
မန်ချက်စတာယူနိုက်တတ်အသင်းရဲ့ ဂန္ဓဝင်နည်းပြကြီးဖာဂူဆန်ကလီပါပူးနည်းပြ ဂျာဂန်ကလော့ကိုLMAရဲ့တနှစ်တာအကောင်းဆုံးနည်းပြအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရပြီးနောက် မနက်အစောပိုင်းမှာ ဖုန်းဆက်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြောင်းSky Sportသတင်းမှာဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဖာဂူဆန်ဟာ ကလော့ဆီကို တနင်္လာနေ့မနက်အစောပိုင်းက ဖုန်းဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ LMAရဲ့တနှစ်တာအကောင်းဆုံးနည်းပြဆုရရှိခဲ့တာတွေကြောင့် ဂုဏ်ပြူစာကားပြောကြားခဲ့တာပါ။ ဖာဂူဆန် က ကလော့ ရေမနက်အစောကြီးဖုန်းဆက်တဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ် ဒီနှစ်မင်းရဲ့နည်းပြအဖွဲ့နဲ့အသင်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေက …
မန်ချက်စတာယူနိုက်တတ်အသင်းမှဒဏ်ရာကြောင့်အနားယူနေရတဲ့ နောက်ခံကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ လုရှောနှင့်အဲရစ်ဘိုင်ယီတို့ဟာ ယနေ့ညယှဉ်ပြိုင်ကစားမယ့် လက်စတာအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာ ယူနိုက်တတ်အသင်းရဲ့လူစာရင်မှာ ပြန်လည်ပါဝင်လာဖွယ်ရှိတဉ်လို့နည်းပြဆိုးရှားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တတ်အသင်းကို တရုတ်ကလပ်ရှန်ဟိုင်းအသင်းကနေအငှားစာချုပ်နဲ့လာရောက်ကစားနေတဲ့ တိုက်စစ်မှူးအီဟာလိုက သူ့ရဲ့အငှားစာချုပ်သက်တမ်းကိုနောက်ထပ်၇လတိုးချဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်မန်ချက်စတာညနေခင်းသတင်းမှာဖေါ်ပြထားပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိ Odion Ighalo ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်သဘောတူညီချက်အသစ်ကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ နိုင်ဂျီးရီးယားတိုက်စစ်မှူးဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနှင့်မေလ ၃၁ ရက်မှာလမ်းခွဲရမှာဖြစ်ပြီး မိခင်အသင်းဖြစ်တဲ့တရုတ်ကလပ်ရှန်ဟိုင်းအသင်းကိုပြန်ရမှာပါ။ဒါပေမယ့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်အကြပ်အတည်းကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံမှာ ပြည်ပမှလာသူများကိုအောက်တိုဘာလအထိပြည်ဝင်ခွင့်မပေးတာကြောင့်အီဟာလိုကိုပြန်ခေါ်ဖို့ကျိုးစားနေတဲ့ တရုတ်အသင်းအနေနဲ့နောက်ဆုတ်ခဲ့ရပြီးကစားသမားရဲ့ဆန္ဒကိုဦးစားပေးခဲ့ရတာပါ။ တရုတ်စူပါလိဂ်ဟာဇူလိုင်လမှာပြန်လည်စတင်မှာဖြစ်ပေမယ့်အီဟာလိုကတော့ ၂၀၂၁ဇန်နဝါရီထိမန်ချက်စတာမှာဘဲရှိနေမယ်လို့သိရပါတယ်။သို့သော် Ighalo …
September 24, 2020 By admin News, Sports News